နစ်နေမန်း၏ (၃) နှစ်ပြည့်မြောက် မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်။ | နစ်နေမန်း
နစ်နေမန်း၏ (၃) နှစ်ပြည့်မြောက် မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်။
နစ်နေမန်း၏ (၃) နှစ်ပြည့်မြောက် မွေးနေ့ အား ဆုတောင်းပေးလာသော ကိုနေမင်းသူရိယနှင့် မိတ်ဆွေများအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိ်ပါသည်။
နစ်နေမန်းအား ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်၏ ဘလော့များတွင် စုစုပေါင်း ပို့ စ်အရေအတွက် (၁၈၁၆) ပို့ စ်အား တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ http://www.niknayman-niknayman.blogspot.com/ (ပို့ စ် – ၉၆၀) နှင့် http://www.niknayman.blogspot.com/ (ပို့ စ် – ၈၅၆) ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်နေမန်းအနေဖြင့် မြန်မာပြည်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် မွေးဖွားခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်အထိ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းထံမှ ငွေကြေးအကူအညီတောင်းခံခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အချိန် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှသာ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းကင်းလွတ်လွတ်ဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံတိုးချဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့် https://niknayman.wordpress.com/ နှင့် http://niknayman-niknayman.co.cc/ တို့ နှင့် မူလဘလော့များဖြစ်သည့် http://www.niknayman-niknayman.blogspot.com, http://www.niknayman.blogspot.com/ တို့ တွင် နည်းပညာပိုင်းအရ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူများ၊ မြန်မာပြည်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများ ဓါတ်ပုံများအား ပေးပို့ လာသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကျွန်တော်၏ စီဘောက်တွင် ပါဝင်ရေးသားခဲ့သူများ၊ ကျွန်တော့်အား ဂုဏ်ပြုပေးကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် “မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ” “မြန်မာဘလော့ဂါပရက်စ်” “ရှမ်းလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ” အစရှိသည့် အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကျွန်တော် တင်ပြထားသော ရေးသားဖေါ်ပြချက်များအား နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် ကျွန်တော်၏ ရေးသားဖေါ်ပြမှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ် လာရောက်ဖတ်ရှူအားပေးကြသော မိတ်ဆွေများအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖေါ်ပြအသိပေးအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နစ်နေမန်း၏ ရရှိခဲ့သော ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများနှင့် ဂုဏ်ပြုစကားများအားလုံးသည် အထက်ဖေါ်ပြပါ ကျေးဇူးတင်ရှိရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပံ့ပိုးအားပေး ကူညီပေးမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် အထူးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုတာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ကျွန်တော်၏ ဘလော့သို့ပြည်တွင်းမှ သတင်းပေးပို့ လာခဲ့သော ပြည်သူလူထုနှင့် အချို့ သော (လုံခြုံရေးအရ အမည်ဖေါ်ပြခွင့် မရသေးသော) ပုဂ္ဂိုလ်များအား နစ်နေမန်း အထူးလေးစား ဂုဏ်ပြု ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့ အဆိုပါ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအချိန်ကာလအတွင်းက မိနစ်ပိုင်း စက္ကန့် ပိုင်းနှင့်အမျှ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများအား ခေတ္တခဏ ဘေးဖယ်ထားကာ ကျွန်တော်၏ ဘလော့နှင့် စီဘောက်တွင် ၀င်ရောက်ကူညီ အားဖြည့်ရေးသားပေးခဲ့သူများအားလည်း နစ်နေမန်းမှ ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်းထားရှိပါကြောင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရာတွင် မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်လည်း ဆက်လက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လွတ်မြောက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြသော ဘလော့ဂါများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ အားလုံးအားလည်း နစ်နေမန်း၏ မိတ်ဆွေ တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် အာဏာရှင်အား ၀ိုင်းဝန်းတော်လှန်တိုက်ထုတ်ကာ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစားကြပါစို့ ။ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းမှ အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာ အာဏာရှင် လျင်မြန်စွာ ပြုတ်ကြမည်။
ဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေသော နဖအများ၏ရန်မှ မြန်မာဘလော့ဂါများ၊ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ ဘေးအန္ဒရာယ် ကင်းဝေးကြပါစေ။ နအဖအာဏာရှင်၏ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရသော ကိုဇာဂနာ၊ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ ကိုမျိုးမြင့်အောင်၊ သားစိုးလေး အစရှိသည့် မြန်မာဘလော့ဂါများ နအဖအာဏာရှင်၏ မတရားချူပ်နှောင်ထားမှုမှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပါစေ။
(ဧပြီလ ၂၈၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)။
This entry was posted on Wednesday, April 29th, 2009 at 10:47 am and is filed under Posts.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.